Gudoomiyihii Iyo Agaasimihii Hore Ee Haay’ada Shaqaalaha Dawladda Oo Maanta Masuuliyiintii Cusbaa Ee Dhawaan Madaxweynuhu U Magacaabay Xilkii Ku Wareejiyay | Duul News International
Gudoomiyihii Iyo Agaasimihii Hore Ee Haay’ada Shaqaalaha Dawladda Oo Maanta Masuuliyiintii Cusbaa Ee Dhawaan Madaxweynuhu U Magacaabay Xilkii Ku Wareejiyay	(Duulnews)-Guddoomiyihii Hore Ee Haay’adda Shaqaalaha Somaliland Ayaa Maanta Xilkii wasaarada ku wareejiyay Guddoomiyaha Cusub.
Munaasibadan loo sameeyay oo ka dhacday wasaarada Cusub ee arimaha gudaha ayaa waxa ka soo qayb galay wasiiro salaadiin iyo marti sharaf aada u badan.
Gudoomiyihii hore ayaa sheegay inaanu ka bixin xisbiga kulmiye kana siimid ahaan doono,xilka qarankuna yahay mid meerta ah,waxaana u mahad naqay madaxwayne siilaanyo.
wasiirka cusub ee wasaarada dibu dajinta somaliland cali siciid raygal ayaa isaguna guddoomiyihii hore sagootiyay kan cusubna u rajeeyay inuu xilkiisa sidii ku haboonaday uga soo baxo.
“Halkan waxaan ugu Mahad Naqayaa Guddoomiyihii Hore ee Haay’adda Shaqaalaha Mudadii uu xilka hayay waxaanan odhan karaa Halkii ugu wanaagsanayd ayuu gaadhsiiyay Haay’adda Shaqaalah,Guddoomiyahan Cusubna waan Soo dhawaynayaa Xilkuna sidiiba waa Meerto maalinba Nin ayaa kataga oo kaas kataga ayaa hadana dib ugu soo noqda,Aniguba waxaan ka mid ahaa ragii ladhaqaajiyay ee dhulka kale loobadalay inkasta oon aniga lay eryin hadana meel kale ayaa laygeeyay.
Intaas waxa uu ku daray wasiirka cusub ee wasaarada dib dajinta somaliland Calin Siciid Raygal oo hadalkiisa siiwata.
“Anba hadii lay sheegi lahaa in laybadalayo Roog garoonka Wayn ayaa dhigi lahaa oo wali Koontiidharkii ku jira,Dabadeena habeen Qudha ayay soo baxdoo layidhi oday halkantag,Markaas Xilka Ayaa sidiisaba Ah meerto Sistamka Dawlada Nimo ayaa sidaas ku samaysan,shacabka somaliland mid xil haya iyo midaan haynba ay diyaar u yihiin in jiritaanka iyo goni isutaaga somaliland yahay muqadas,waxaana inoo balan ah in aynu soo dhawaynayo cida aan xilka hayn iyo ka hayaba.
Guddoomiyihii Hore ee Haay’adda Shaqaalaha somaliland Nuux Sheekh Muuse Ducaale ayaa sheegay inaanu ka tagayn Xisbi Kulmiye Kana Siimid Ahaan Doono,Xilkana Laga qaadayna waxa uu ku tilmaamay mid Meerto ah oo Maalinba ninkii hanankar loodhiibayo waxaana uu yidhi.
“Waxaan u Mahad naqayaa madaxwayne siilaanyo oo shalayna i magacaabay maanta xilka iga qaaday,Saxaafaduna inta badan qofka shaqada laga eryo halkaad tagaysaa ayay yidhahaan,waxaan leeyahay halkaygan Ayaan joogayaa meel aan tagayo majirto madaxwaynahaas hada imagacaabay ayuunba la shaqayn doonaa aniga oo dibada iska jooga,Markii lay magacaabay shaqaalaha dawladu tiradoodu waxa ay dhamayd Lix kun Maanta waxa ay dhanyihiin shan iyo tobankun.
Intaas waxa uu ku daray Guddoomiyihii Hore ee Shaqaalaha dawlada.”Shaqaalaha dawladu waa shaqaale shaqada ay hayaan adagtay waayo badan iyo Duruufahooda lehan ku samray,Xukuumadan uu hogaaminayo madaxwayne siilaanyo Boqolkiiba Boqol Lacagtii shaqaalaha way kordhiyeen,Midna waan kuu sheegayaa Guddoomiye Wasiir Shaqaale cadaadinaya oo ku leh kan eri haka yeelin taasna waa halkaas.
Wasiirka wasaarada Boosaha iyo is gaadhsiinta Somaliland Maxamed Jaamac Abgaal ayaa isaguna u mahad naqay guddoomiyaha Xilka Wareejinaya oo ku amaanay kaalinta Muuqata ee uu shaqaalaha kor ugu soo qaaday,Guddoomiyaha Cusubna waxa uu u rajeeyay inuu halkaas kasiiwado Hawshaas Adagna ee loodhiibayna u dhara adayga.
Gaba-gabadii Guddoomiyaha Cusub ee Haay’adda Shaqaalaha somaliland Maxamed Mixiile Boqore ayaa isna sheegay inuu ku shaqayn Doono cadaalada iyo sinaan qofkasta uu halkiisa iyo aqoontiisa ku amaani doono shaqada uu ku heli doono.
“Haay’ada Shaqaalahu Maaha Sida Lamoodayo Wasaarado badan ayay ka shaqo badan tahay,wixii nuux haystay markaan arkayay markaan eego shaqo la’aanta dalka taala iyo kuwa shaqo doonka ah,Markaan eego hab dhaqan keenan imika ee beel waliba doonayso in qof looshaqaalaysiiyo markaan iskuwada gooyo waa haay’ada culus oo dad badan oo aad saaxiibo ahaydeen isku nacaysaan,reer awdal haday tabasho lahayeen iyo hadaanay lahaynba abgaalo adaa wasiir u ah.
intaas waxa uu ku daray isaga oo hadalkiisa siiwata guddoomiyaha cusubi.”anigu laba walaal Ayaan leeyahay oo cidwaliba taqaano waxaan weeyaan mid waa daacada midna waa cadaalada waa labada dadkuna ugu neceb yahay sharciga iyo hadaalada Ayaan ku dhaqayaa shaqaalaha dawlada iyo haay’adda shaqaalaha,Gaariyana waa kiilahaa dusduskiyo khiyaamadu haday Dunidu ceebtahay noodabeecad weeyaan dadkaygu malibiqsado,anigu markaas waxaas aqbali maayo.
Hadaba Guddoomiyaha cusub iyo Guddoomiyihii hore ee haay’adda shaqaalaha ayaa xilkii Siniyada Sami ah ula Kala wareegay Xafladina waxa ay ku soo dhamaatay jawi dagan oo farxadi ku dheehan tahay.
Dhegayso:“Dameerku Hadduu Dhergo Oo Uu Dibiro Inuu Danaahiyo Waa Lagu Yaqaanaa”. Muj Cali Gurey Oo Dhulka La Dhacay Wasiir Xirsi